News Collection: खोइ र समय संसर्गका लागि ?
बल्ल त सम्हालिन थालेकी छु : रेखा थापा
दुई चार फिल्म चल्दैमा कोही सुपरस्टार बन्दैन। सुपरस्टार बन्न समय लाग्छ, कडा मेहनत गर्नुपर्छ र प्रबल इच्छा र लगनशीलता चाहिन्छ। मेहनत गरेर, समयको जोखना हेरेर, धैर्यसाथ पालो कुरेर सुपरस्टार बनेकी पहिलो नायिका हुन्- रेखा थापा। रेखाभन्दा अघि पनि नायिका नभएका होइनन्। तर त्यतिखेर नेपाली फिल्ममा स्टारडमको चलन थिएन। रेखाबाटै सुरु भएको हो, नेपाली फिल्ममा नायिका पनि सुपरस्टार बन्ने प्रचलन।
रेखा थापासँग कुराकानी गर्दा लाग्यो, स्टारडम पाउन जति सजिलो छ, त्यति नै गाह्रो छ त्यसलाई कायम राख्न। 'हिरो' फिल्मबाट नेपाली फिल्ममा डेब्यु गरेकी रेखाले १२ वर्षको अवधिमा एक सय १५ भन्दा बढी फिल्ममा अभिनय गरिसकेकी छिन्। रेखामा एउटा सिंगै फिल्मलाई चलाउन सक्ने खुबी छ। यो चानचुने कुरा होइन। बाह्र वर्षको यो छोटो अन्तरालमा उनले यति धेरै उतारचढाव देखिन्, जसले उनलाई परिपक्व र आफैंमा सुसंगठित हुन सिकायो।
तपाईँलाई नेपाली फिल्म जगत्मा प्रवेश गर्दा सुपरस्टार हुन्छु भन्ने लागेको थियो?
मलाई बच्चैदेखि म फिल्मबाहेक अरू कुनै क्षेत्रमा सफल हुन सक्दिनँ भन्ने थियो। त्यसैले म कुनै न कुनै दिन सुपरस्टार हुन्छु भन्ने पक्का थियो। मभित्र त्यस्तो महत्वाकांक्षा पनि थियो। त्यसैले म अहिले यो स्थानमा पुग्दा कुनै आश्चर्य लागेको छैन।
यो अन्तर्वार्ताकार रेखाको मन चोर्ने प्रयासमा थियो।
तपाईँले नायिका बनेर सुपरस्टारका रूपमा स्थापित हुन आफूले आफैँलाई कसरी तयार पार्नुभयो त?
रेखा उत्तर दिन कति पनि हतारिइनन्।
म त बल्ल आफूलाई सम्हाल्न थालेकी छु। पहिले आफूलाई खुला छोडिदिएकी थिएँ। मोरङबाट ब्युटी पेजेन्ट जितेर 'मिस नेपाल'मा भाग लिन काठमाडौँ आउँदा यत्तिकी कहाँ थिएँ र? धेरै कठिन संघर्षपछिमात्र मिस नेपालमा भाग लिने अवस्था सिर्जना भएको थियो। त्यसपछि जब पत्रपत्रिकामा मेरा फोटा देखिन थाले, मलाई नेपाली फिल्मको सम्भावित नायिकाका रूपमा हेर्न थालियो। मिस नेपालमा खासै केही हात लागेन। तर त्यसले मनमा एक प्रकारको हुटहुटी जगाइदियो। लगत्तै 'हिरो' फिल्ममा खेल्ने अफर आयो। त्यो गरेँ। त्यसको लगत्तै छविसँग बिहे भयो। अनि, के-के भयो, भयो!
'म चाँडै बहकिन्छु' उनी स्वीकार गर्छिन्। सुपरस्टार भइसके पनि उनी भित्रको टिनएजर अझै जागृत छ।
'हिरो' फिल्म खेलेको कति पछि तपाईँलाई अर्को फिल्म खेल्ने अफर आयो?
खासमा भन्ने हो भने 'हिरो' रिलिज भइसकेको र अर्को कुनै फिल्मको अफर नआएको अवस्था नै मेरो करिअरको सबभन्दा कठिन 'ट्रान्जिसन फेज' थियो। मैले बिहे गरिसकेकी थिएँ। सोह्र वर्षकी मात्र थिएँ। एक वर्षसम्म कुनै फिल्मको अफर नआउँदा, सुरु नहुँदै करिअर टुंगियो भन्नेसम्म दिमागमा हाबी हुन थालेको थियो। डिप्रेसनका लक्षण देखा पर्न थालेका थिए। माइग्रेनले सताउन थालेको थियो। म सबै छोडेर विदेशिने सोचमा पुगेकी थिएँ। इन फ्याक्ट, मैले छविलाई भनेकी पनि थिएँ, 'ड्याडी, मलाई बेलायत पठाइदेऊ। म ठूली भएर पढेर आउँछु, अनि सँगै बसौँला!' तर अन्तिम समयमा अशोक शर्मा दाइले फोन गरेर, 'फिल्म खेल्ने होइन?' भन्दा म ह्वाँह्वाँ रोएकी थिएँ, खुशीले। त्यसपछि त मैले पछाडि फर्केर हेर्नु नै परेको छैन।
आफ्नो सफलताको बारेमा कुरा गर्न कसलाई पो मज्जा नलाग्ला र? रेखा साह्रै उत्साहित थिइन्। संवाददाताले मौकाको फाइदा उठाउँदै रेखाले सायद सोच्दै नसोचेको प्रश्न गर्ने विचार गर्‍यो।
तपाईँले त्यति सानो उमेरमा नै बिहे गर्नु भएछ। त्यो बिहे केको परिणाम थियो? प्रेमको, परिस्थितिको वा अरू कुनै बाध्यता थिए?
उनी अत्यन्त सहजताका साथ संवाददाताका प्रश्नलाई इन्टरटेन गर्दै थिइन्। उनका बारेमा चलेका बजार-हल्ला स्वतः भ्रम साबित हुँदै गएका थिए।
मेरो बिहे प्रेम वा आकर्षणको परिणाम अवश्य नै थिएन। त्यो परिस्थितिले गराएको सम्झौता थियो। यो सम्झौताले पछि प्रेमको नाम पायो। आखिर एरेन्ज म्यारिजमा हुने पनि त्यही नै त हो। मलाई त्यो बेला सहाराको आवश्यकता थियो। त्यो आवश्यकता छविले पूरा गर्छ जस्तो मलाई लाग्यो। मेरो त्यो डिसिजन अहिले सही साबित भएको छ। उसले मेरो अभिभावक र श्रीमान् दुवै भूमिका राम्रोसँग निर्वाह गरेको छ।
बरु म राम्रो श्रीमती बन्न सकेकी छैन। म भाग्यमा पनि विश्वास राख्छु। सायद छैटीको दिन मेरो निधारमा विधाताले त्यस्तै लेखेका थिए।
सोह्र वर्षकी केटीलाई आफूभन्दा २० वर्ष जेठो पुरुषले कसरी आकर्षित गर्‍यो? के देख्नुभयो छविजीमा त्यस्तो?
मैले अघि नै भनेँ, त्यो कसरी भयो मलाई थाहा छैन। अहिले आएर त्यो सोह्र वर्षे रेखाको डिसिजनलाई केलाउँदा लाग्छ, त्यतिबेला म आत्तिएकी थिएँ। डराएकी थिएँ। मलाई सहारा चाहिएको थियो। फिल्म क्षेत्रमा कोही थिएनन् मेरा। यसको गलत अर्थ नलागोस्, मलाई सेफल्यान्डिङ चाहिएको थियो। अहिलेको जस्तो फिल्म इन्डस्ट्री भएको भए कुरा अर्कै हुन्थ्यो होला।
परिवारले तपाईँको बिहेलाई कसरी लियो? सहजै त पक्कै स्विकारेन होला?
ममी रिसाएर आगो हुनुभएको थियो। बुबाले खासै प्रतिक्रिया जनाउनुभएन। तर मेरो परिवारलाई भन्दा बढी मेरो चिन्ता मिडियाका साथीहरूलाई रहेछ। उहाँहरूले खुब कमेन्ट गर्नुभयो। एउटा पत्रिकाले त 'रेखा पोइल गई' भनेरै लेख्यो। बिहे गर्नु र पोइल जानुमा त आकाश-जमिनको अन्तर होला नि, हैन?
अब बढ्दो उमेरसँगै टेस्टमा पनि त परिवर्तन आउनथाल्यो होला नि?
म कहिल्यै केटाहरूको आकर्षणमा परिनँ। त्यसो भन्दैमा म लेस्बियन चाहिँ हैन, है। यसमा क्लियर भए हुन्छ। मेरो व्यक्तित्व नै यस्तो छ कि म कसैप्रति आकर्षित नै हुन्नँ। यदि हुन्थेँ भने बाह्र वर्षसम्म छविकी श्रीमती बनेर बस्ने थिइन हुँला।
आफ्ना उमेरका र आफूभन्दा कम उमेरका सँग पनि त्यत्रो फिल्म खेल्छु। खै, कसैसँग चास्सचुस्स केही हुँदैन। म अलिक डिफरेन्ट टाइपकी छु। मेरो बाबाले मेरो नाम रेखा राखिदिनुभयो। बलिउडकै जस्तो रेखा हुन भने म चाहन्नँ।
नेपाली फिल्म क्षेत्रमा त्यति धेरै योङ, म्याचो, ह्यान्डसम केटाहरू छन्। तपाईँ कसरी आकर्षित हुनुहुन्न?
यो प्रश्नले रेखा चिढिन्छिन् होला भन्ने संवाददातालाई लागेको थियो। तर उनी त अझै धक फुकाएर बोल्ने मुडमा थिइन्।
पहिलो कुरा त म विवाहित स्त्री हुँ। म यो मानेमा निकै कन्जरभेटिभ छु। त्यसैले पनि कसैले आकर्षित नगरेको होला। म सिंगल भएको भए केटाहरूसँग झुम्मिन पनि सक्थे हुँला। दोस्रो कुरा, म जे छु, खुशी छु। दुखीसँग सम्बन्ध गाँसेर किन दुखी बनुँ? प्रायः सबैको आन्द्राभुँडी मलाई थाहा छ। फेरि यो अन सेट लभ-सभ भनेको ननप्रोफेसनल कुरा हो। प्रोफेसनल भएर काम गर्दा त्यस्तो फिलिङ्स नै आउन्न।
भनेपछि, नेपाली फिल्मका सबै हिरो रेखाको तुलनामा दुखी छन्?
सबै होइन, केही। केहीको हकमा म दुखी साबित हुन्छु। अनि माइनस-प्लस पनि त माइनस नै हुन्छ नि!
छविजीप्रतिको सहानुभूतिले गर्दा पनि त यसो भएको होला नि?
छ। त्यो आजीवन रहिरहने छ। म जहाँ भए पनि म ऊप्रति अनुगृहीत नै रहने छु।
तपाईँको धेरै जना नवनायकसँग नाम जोडिएर जुन किसिमको चर्चा हुने गरेको छ, त्यो सुन्दा कस्तो लाग्छ?
ती सबै कपोलकल्पित कुरा हुन्।
हावा नचली पात हल्लिँदैन भन्छन् नि-
यो चैतको हावाले हल्लाएको पात होइन। माघको जाडोमा ठिङ्रिङ्ङ उभिएको रुखलाई जबर्जस्ती हल्लाएर हावा चलेको जस्तो देखाउन खोजिएको हो। यो रुख हल्लाउनेहरूलाई बल दिने त दुई प्लेट मम र एक बोतल बियर नै हो नि।
तपाईँ पनि त रुख हल्लाउनेलाई बल दिनुहुन्छ रे नि। अस्ति त्यस्तै केही भएको थियो, होइन?
त्यो घटनाप्रति म लज्जित छु। त्यो मेरो बचपना थियो कि मैले सबैलाई एउटै दर्जामा राखेँ। त्यो गलत थियो। मैले रियलाइज गरिसकेकी छु। र, माफी पनि मागिसकेँ।
ल, त्यसो भए नढाँटी भन्दिनुस्, तपाईँ आजको मितिमा छवि ओझाकी प्रेमिका, श्रीमती हो कि होइन?
आजका मितिसम्म हो। भोलिको ग्यारेन्टी कसैले लिन सक्दैन। प्रेमिका र श्रीमती नभए पनि छविका लागि म आजीवन छोरी हो। ऊ मेरो अभिभावक मात्र नभएर श्रीमान् पनि भएकाले त यति धेरै कुरा बाहिर आइरहेको छ। घरमा अनबन कसको हुँदैन र? तर त्यसलाई इसु बनाउनुहुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो। भोलि डिभोर्स नै भयो भने पनि के भयो त? के म नेपालमा डिभोर्स गर्ने पहिलो महिला हुन्छु र?
रेखा फिल्म्सको ब्यानरमा जति पनि नायकले ब्रेक पाउँछन्, तीसँग तपाईँको नाम जोडिएर चर्चा हुने गर्छ। त्यस्तो किन?
मेरो चरित्रमा कुनै दाग छैन। कसैले म चरित्रवान् छैन भन्ने आरोपको पुष्टि गर्छ भने म फिल्म क्षेत्र नै छोडिदिन्छु।
आफ्नो यौन चाहना पूर्ति गर्न श्रीमान्बाहेक अरूसँग सम्बन्ध राख्नु अपराध हो र?
हो नि! मोडर्न मानिने अमेरिकी समाजमा त त्यस्ती आइमाईलाई चरित्रहीनको संज्ञा दिन्छन् भने हाम्रो समाजमा त यो धेरै ठूलो अपराध हो। मैले यसो भनिरहँदा 'स्वाङ पारी, झुट बोली' भन्लान्। छविको कारणले पनि त्यसो भनेको हुनसक्छ। तर कसम खाएर भन्छु- म चरित्रहीन छैन र हुने केही काम गरेकी छैन।
छविबाहेक अरू कसैसँग पनि तपाईँको शारीरिक सम्बन्ध छैन त?
छैन। हामी लोग्नेस्वास्नीसँग समय नै हुन्न, शारीरिक सम्बन्धका लागि। महिना, छ महिनामा एकपटक! पत्याउनुस्, नपत्याउनुस्। वास्तविकता यही हो। ऊसँग संसर्ग गर्न त मसँग समय छैन भने अरूसँग संसर्ग गर्न मसँग कहाँबाट समय हुनु? यस्तो मामिलामा म साह्रै कन्जरभेटिभ छु। अर्को कुरा, जसरी अचेल सेक्स भनेको दालभातजस्तै हो भनेर बाहिर आइरहेको छ, मेरो लागि त्यो मान्य छैन। मेरा लागि सेक्स साधना हो। साधनाको रूपमा लिएपछि म अरू थुप्रै किसिमबाट आनन्दित हुनसक्छु। त्यसका लागि कसैसँग सुत्नु आवश्यक हुँदैन। यो मेरो व्यक्तिगत मान्यता हो।
रेखालाई सेक्स फिटिक्कै मन पर्दैन भन्ने होइन। तर उनी सेक्सलाई सम्पूर्ण आनन्दको कारक हो भन्ने पक्षमा छैनन्। उनी भन्छिन्, 'त्यसो भएको भए म आज जहाँ छु, त्यहाँ हुन्न थिएँ होला। सेक्सका लागि लालायित हुने केटीहरूको वर्किङ आउटपुट कम हुन्छ।'
कति पर्सनल लाइफको बारेमा मात्र कुरा गर्ने? केही राजनीतिका कुरा पनि गरौँ, है? तपाईँ माओवादी पार्टीसँग खुब नजिक हुनुहुन्छ। राजनीतिमा धेरै नै चासो छ जस्तो छ नि?
त्यस्तो धेरै त होइन। अलि-अलि छ। माओवादी पार्टीसँग मात्र मेरो निकटता होइन। सबै पार्टीका नेतालाई म चिन्छु। उहाँहरूले पनि चिन्नुहुन्छ मलाई। व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने, माओवादी पार्टीको चेन्जको जुन एजेन्डा थियो, त्यो देखेर मलाई त्यो पार्टी मन परेको थियो। तर खै, उनीहरू नै चेन्ज भएको भान हुन्छ हिजोआज। कुरा गरेर चेन्ज गर्छु भन्नु र वास्तवमै काम गरेर देखाउनु अलग-अलग कुरा रहेछन् जस्तो लाग्छ। सबैतिरबाट एकैनासको सहयोग भएको भए चेन्ज सम्भव हुन्थ्यो होला। त्यो नभएकाले गर्दा चेन्ज हुन सकेन।
अहिले पनि त्यो आकर्षण कायम छ कि हट्यो?
खै, कनफ्युजन छ यसमा। कम्प्लिट्ली हटेको पनि छैन, कायम पनि छैन।
तपाईँ राजनीतिमा आउने चान्सेस कतिको छ?
म केही समयपछि राजनीति अवश्य नै गर्छु होला। राजनीति गर्न मन छ। हेरुँ के हुन्छ।
होइन, मन्त्री नै हुने। उद्देश्य त ठूलै लिनुपर्छ।
फेरि फिल्मकै कुरा गरुँ न भनेर आग्रह गर्दा उनी दंग परिन्। सबैलाई आफ्नै क्षेत्रको कुरा गर्दा सहज हुने रहेछ।
तपाईँको सबैभन्दा हिट फिल्म कुन हो?
'हिम्मत' जस्तो लाग्छ।
अनि फ्लप नि?
'वज्रपात' होला। त्यो साँच्चीकै वज्रपात नै थियो भनेर धेरैले भने।
आफैँलाई मन परेको फिल्म?
मलाई 'दुर्गा' फिल्मले मेन क्यारेक्टरका रूपमा स्थापित गरिदियो। हिरोइनलाई मेन बनायो भने फिल्म चल्दैन भन्ने मान्यता हटाइदियो। मलाई हिरोको दर्जा दिलायो। त्यसैले त्यो फिल्म मेरा लागि विशेष छ। आफैँलाई मन परेको फिल्म चाहिँ 'कसले चोर्‍यो मेरो मन' हो।
एउटा फिल्म साइन गरेको कति पारिश्रमिक लिनुहुन्छ?
फिल्म बनाउन कति दिन लाग्छ?
राम्रो आम्दानी हुँदो रहेछ त?
अहिले सन्तोषजनक नै छ, नेपाली मार्केट हेरेर।
यसो फर्केर हेर्दा कस्तो पाउनुहुन्छ जिन्दगी?
मैले त फिल्म नै खाएँ, फिल्म नै सुतेँ र फिल्म नै पढेँ। त्यसैले रिल, एक्सन, कट नै जिन्दगी हो जस्तो लाग्छ। आमालाई म तपाईँलाई माया गर्छु भन्न पनि डर लाग्छ। यसले नौटंकी गरी भन्ने हुन् कि? अहिले फरक किसिमले सोच्न थालेकी छु। रिल लाइफले रियल लाइफलाई टेक ओभर गर्न दिन नहुनेरहेछ।